हरेक दिन, दोस्रो मौका! - Blogs of Sagar Prasai
हरेक दिन, दोस्रो मौका!
हार्बड युनिभर्सिटिको साउथ एसिया ईन्स्टिच्युटको वेभसाईटमा मिलन र उनका सेता पुतलीहरूको तस्बिर
२०५६ सालमा मिलन राई धरानको एउटा नाम चलेको स्कुलमा कक्षा ८ मा पढ्थे। त्यस बर्षको वार्षिक परिक्षामा निकै वटा विषयमा फेल भए र कक्षा ९ मा जान सकेनन्। उनले स्कुल बदले, त्यहाँ त झन् उनी ७ दिन पनि टिक्न सकेनन्। त्यसपछि अर्को स्कुल। यो स्कुल जान थालेको केहि महिनामा नै प्रिन्सिपलले मिलनका बुवा-आमालाई बोलाएर- आफुहरू उसलाई यहाँ पढाउन नसक्ने बताउँदै स्कुलबाट निकालिदिए। मिलनका बुवा-आमा एकदमै दुखी भए र दिक्क पनि। त्यसपछि अन्तिम मौका स्वरुप मिलनलाई काठमाडौँ पठाईयो। तर उनी यहाँ पनि सुध्रेनन। उनले SLC परिक्षा पनि नदिई स्कुल छोडे।
मिलनलाई सबले भन्न थाले- तैले पढेको छैनस्, तेरो जिन्दगी अब सकियो। मिलनका सबै साथीहरू आफ्नो पढाईमा व्यस्त थिए, उनी एक्लै छोडिए। रिस र दिकदारी उनीमा यति बढ्यो कि उनी कुलतमा लागे। नानाथरी खान थाले, ग्याङ्ग फाईट गर्न थाले। अँध्यारो बाटोमा हिडेका उनी दुखको खाडलमा नराम्ररी परे। उनी बाहिर आउन चाहन्थे, तर कसरी थाहा थिएन।
मिलन सानै देखी पेन्टिङ्ग गर्न रुचाउँथे। त्यसकारण उनले बिस्तारै आफ्नो डर र दुविधाहरू चित्रहरूमा उजागर गर्न थाले। सुरूमा त उनको चित्रहरुको प्रदर्शनी गर्न ग्यालरी हरू तयार भएनन्। बिंस २०६४ तिर मिलनले आफ्नो पहिलो एकल प्रदर्शनी गरे। खास सफल भएनन्। तर उनी रोकिएनन्। र आफ्नो चाहना र कलालाई ग्यालरीको साँघुरा पर्खालमा मात्र खुच्याएर राख्न पनि चाहेनन्। उनी कलासँग सम्बन्धित बिभिन्न कामहरू गर्न थाले।
त्यसपछि मिलनले मित्राता र शान्तिको प्रतिकको रुपमा सेतो पुतली (White Butterfly) अभियान थाले। उनी बिभिन्न ठाउँमा कागजबाट बनेका सेतो पुतलीहरू टाँस्दै हिड्थे। मान्छेहरू उनलाई देखेर हाँस्थे र उनलाई बेसुरे भनेर खिल्ली उडाउँथे। तर उनलाई केहि फरक पर्दैन थियो। बिस्तारै उनको अभियानको बारेमा धेरैलाई थाहा हुदै गयो। सँसारका बिभिन्न ठाउँबाट मिलन र मिलनका सेता पुतलीहरूलाई निम्तो आयो। कति ठाउँ मिलन आफै पुगेर पुतली टाँसे भने कति ठाउँ उनले बाकसमा भरेर पुतली हरू पठाए। मिलन र मिलनका पुतलीहरू संसार घुमे।
ती SLC पनि पास नगरेका, मान्छेहरूबाट बेईजती खपेका, कुलतमा गाँजिएर झन्डै जिवन सम्म अन्त्य गरेका मिलन राईलाई केहि हप्ता अघि सँसारको प्रसिद्ध हार्बड युनिभर्सिटिको साउथ एसिया ईन्स्टिच्युटले पत्र पठाउँदै आफ्ना शिक्षक तथा विध्यार्थीहरूलाई उनको जिवन र कलाको यात्रा सुनाउनको लागी निम्तो गर्यो। "अल एक्सपेन्स पेड ट्राभल" अर्थात सबै खर्च आयोजकले बेहोरिदिएको यात्रामा आगामी हप्ता फेरी एक बाकस सेतो पुतलीहरू बोकेर मिलन अमेरिका जानेछन् र संसार प्रसिद्ध सो विश्वविद्यालयका भित्ताहरूमा फेरि एकपल्ट मिलनका सेता पुतलीहरू टाँसिनेछन्।
भनिन्छ नि- हरेक दिन दोस्रो मौका हो। मिलन राईको जिन्दगी हेर्दा मलाई यो कुरामा अझ विश्वास लाग्ने गर्छ। उनलाई धेरै शुभकामना।
(तस्बिरमा: हार्बड युनिभर्सिटिको साउथ एसिया ईन्स्टिच्युटको वेभसाईटमा मिलन र उनका सेता पुतलीहरूको तस्बिर)